Plọgị ike na mpụga Ndị N - N'ogbe diffusers maka mkpa mmanụ | AromaEasy
Nkwụnye ọkụ & mpụga Ndị N
A na-eji Ndị N mee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị na Brazil na South Africa. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na plọg / soket ha)
Ndị N soket na plọg bụ ọkọlọtọ gọọmentị na Brazil na South Africa. Ihe nkwụnye ahụ nwere pinni abụọ na ntanye. Enwere uzo abuo: nkpuru nke 10 A nwere dayameta nke 4 mm na ogologo nke 19 mm. A na-eji ụdị nke abụọ, nke agbagoro na 20 amps, maka ngwa ndị dị arọ karị ma nwee pinpin 4.8 mm, mana na-atụkwa 19 mm n'ogologo. Ebe etiti ahịrị na ahịrị ndị nwere oghere na-adịkarị 19 mm dị iche. Oghere dị n'etiti etiti mkpụrụ etiti na etiti etiti akara ahụ na-ejikọ atụ ike abụọ bụ 3 mm. Ekepụtara ụdị sọksị N a ka ịnabata ya ụdị C pilogi. Ndị N yiri nnọọ nke Switzerland-ụdị J ọkọlọtọ, mana ọ dakọtara ya ebe ọ bụ na ụdị N nwere ụwa pin na nso akara ahụ na-ejikọ atụdo ike abụọ (3 mm kama 5 mm).
Ndị N dabere n’ezie usoro ọkọlọtọ ụlọ 230 V nke ụlọ ana-akpọ IEC 60906-1. N’afọ 1986, thelọ Ọrụ Mba Ndị Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka publishedwa bipụtara ụkpụrụ a, nke ezubere ka ọ bụrụ ọkọlọtọ maka Europe dum (na mgbakwunye, ógbè ndị ọzọ niile nwere ụmụ nwanyị 230 V). Ọ bụ ihe nwute na, etinyela mbọ iji wee were ya dịka ọkọlọtọ European Union n'etiti 1990s. Brazil ji ihe dị ka 10 (!) Ụdị plọg na soket, gụnyere ihe ndị a na-ejikarị ụdị C. Iji kwụsị ngbasa nke ụdị sọks na plọg dị iche iche, Associationtù Ndị Ọchịchị nke Brazil (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)) kpebiri ịmebe iwu na IEC 60906-1. Na 2001, a nakweere ụkpụrụ a na Brazil dị ka NBR 14136 na mmejuputa ya malitere na 2007. Nke a Norma BRasileira 14136, agbanyeghị na IEC 60906-1 abụghị otu ihe: ọkọlọtọ Brazil nwere ntụtụ nha nke 4 mm maka nkwụnye 10 A na 4.8 mm maka 20 A, ebe ụkpụrụ mbụ IEC 60906-1 nwere naanị otu otu pensụl pin nke 4.5 mm na kacha ugbu a nke 16 A.
Site na teknụzụ ntụtụ ọgbara ọhụrụ, nke na-adịghị adị mgbe emebere ụdị plọg ndị ọzọ mbụ, ụdị N nso nso a bụ ezigbo kọmpị, siri ike ma dịkwa mma karịa sistemụ / sọks ndị ọzọ n'ụwa.
Nhazi mba Brazil na otu plọg na ụdị akwa nwere ụfọdụ ihe ọghọm dị. N'ihi gịnị? Naanị n'ihi na Brazil bụ otu n'ime mba ole na ole enweghị ọkụ eletrik, mana n'otu oge ahụ, ọ nwere naanị otu ụdị soket ọzọ! N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ịnweghị ike ịkọ ọdịiche dị n'etiti oghere 220 V na oghere 127 V! (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke ngalaba 27 fọdụl Brazil na nke ha.) Ọtụtụ steeti na-eji ọkụ eletrik 127 V, mana di na nwunye nọ na 220 V. Nke a pụtara na a ga-ebibi onye na-akpụ ntutu 127 V na steeti Minas Gerais. mgbe etinyere n’ime oghere 220 V kwekọrọ na Distrito Federal! Gbaa mbọ hụ na ị lelere mpaghara ọkụ gị tupu ịkwunye ihe! Usoro amamịghe ịmara ọkụ eletrik dị na mpaghara (ịlele bọlbụ iji hụ ihe e dere na ya) anaghị arụ ọrụ, ebe ọ bụ na ụfọdụ ụlọ nwere ma ọkụ elekere 127 V na 220 V maka ọkụ ha. Ekwesịrị ikwu na ọtụtụ akụrụngwa a na-ere na Brazil bụ voltaji na-arụ ọrụ, mana nke ahụ abụghị eziokwu maka ha niile.
Ọ dabara nke ọma, n’ime afọ ole na ole gara aga, enweela ike ime ka ọdịiche nke plọg pụtara nke ọma. Ọtụtụ mgbe, sọks 220 V ga-acha ọbara ọbara na ụzọ 127 V ga-acha ọcha. Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị, enwere ike iji mpempe akwụkwọ na-egosi voltaji sọks ahụ. Enwere ike ịzụta akwụkwọ mmado dị ọcha na nke ọcha n'ọtụtụ ụlọ ahịa DIY n'oge a.
Mpempe ike & mpụga Mdị M